Qatar, Misaina ny Fanahy sy ny Fomba Fanao Rehefa Ramadàny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2017 15:01 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Aogositra 2009)
Ramadàny tao Souq Wagif, ny fahitàna ny ivontoerana koltoraly Islamika.
Antoandro ny ao Doha, lasa somary nangingina i Qatar tamin'iny herinadron'ny 28/08/2009 iny, satria efa manomboka mampifanaraka ny ataony amin'ny Ramadàny izay nanomboka ny Sabotsy 22/08/2009 ireo mponina any amin'ity firenena miozolmana ity.
Satria io no volana masina indrindra ho an'ireo miozolmana, dia fotoana tokony hisaintsainana ny Ramadàny, hoy ilay Qatari mpanoratra, K Saleh:
Tokony haneho hatsaram-panahy ianao, malemy fanahy, madio, ary mahay mankasitraka ny hoe mbola manam-bintana ianao eo amin'ny fiainana fa manana sakafo hohanina ary mieritreritra ny hanome ireo zara fa manana eo amin'ny fiainana.
Saingy raha ny tena zavamisy, ho an'ny maro ao Doha dia mandray dikany hafa mihitsy ny Ramadàny, satria mazàna izy io no mifandray amin'ny fialàntsasatra fohy (omen'ny fanjakàna), sakafo mirenty sy lafo vidy ary fiarahana mikoràna hatramin'ny alina.
Hazavain'i Mohana ao amin'ny A Day in Doha ny kiana iray iraisan'ny rehetra.
Maro no miteny manakiana ny fandanilaniam-poana amin'ireo sakafon'ny vaninandro maoderina atao aorian'ny fampitsaharana ny fifandiankanina rehefa iftar, na ny footor, araka ny ahafantarana azy any amin'ny Gôlfa. Aorian'ny daty (voankazo mamy) sy ny laban mba hanamaivamaivanana ireo lanilany foana, misy fiparitahanà sakafo izay toa lavitry ny fahantrana sy ireo mahantra ka iantsoan'ny Ramadàny ny olona mba ho saintsaininy.
Zarainy ihany koa ireo fomba fijery tsy Miozolmana. Ho an'ny maro, hoy izy manoratra, resaka momba ny tsy fahampiana ny Ramadàny.
Ho fanehoana firaisana amin'ny fiarahamonina dia mikatona avokoa ireo trano fisakafoanana rehetra, sy ireo toerana fivoahana ialàna voly, toy ny fijerena sarimihetsika ary filalaovana bowling. Tsy misy alikaola aroso ao amin'ny firenena, na any amin'ireo hotely izay raha ny mahazatra dia miasa ho toy ny fantsakàna rehefa alina ny andro.
Voaràra na ny fihinanana, na ny fisotroana imasombahoaka, ary miatrika sazy ara-bola henjana izay tratra, no sady mety hifonja.
Sarotra narahana izany fepetra izany tamin'io volana Aogositra 2009 io, satria Doha niaina hafanàna sy hamandoana tsy mbola nisy toa izany.
Tao amin'ny sehatra firesahana Qatar Living, nifanakalo hevitra momba ny fahamendrehan'ireo fameperana ireo ny mpaneho hevitra.
Tallg manoratra hoe:
io dia olona tena marefo tsy afaka manohitra ny fakampanahy tsy hihinana satria fotsiny hoe mahita olona hafa manao izany ry zareo. Tsy maintsy miaritra fifadiankanina lavalava kokoa noho ny eto ireo miozolmana any Angletera (mandritry ny vanintaona mafàna) ary mahita ireo olona manodidina azy mihinana sakafo…tena tsy mifaditrovana tsy araka ny maha-olona ny fanerena antsika tsy hihinana mifanohitra amin'ny sitrapontsika.
i Mandilular, mpaneho hevitra manampy hoe:
Tena tiako ny Ramadàny saingy aleoko any Etazonia mandritra ilay volana masina. Misy zavatra tsy mendrika fotsiny izao momba ny fotoana natao ho any vavaka ara-panahy sy ny fianakaviana ary ny fifadiankanina izay mandrahona ireo tsy manaja izany hifonja telo volana an-tranomaizina.
Fluffy123 manohitra izany:
Avy any Etazonia aho fa aleoko aza eto toy izay any rehefa Ramadàny. Eny, tsy tokony hanapaka ny fifadianao hanina ny fisian'ny olona mihinana eo anoloanao. Saingy manamora kokoa ny fifadianao hanina raha toa ny olona tsy mitsamontsamona tainkanina eo anoloanao. Ary faharoa ho an'ireo olona tsy mifady hanina, tsy dia olana be manao ahoana ny miezaka tsy mihinana eny imasombahoaka. Tsy misy olona miteny aminao hoe aza mihinana mandritry ny andro itenenany hoe tsy mihinana eny imasombahoaka izy.
Betsaka amin'ilay fifanakalozan-dresaka no azo jerena ao amin'ny Qatar Living.
Na dia henjana aza tamin'izany fotoana ny mampifanaraka ilay volana, maro ireo tsy miozolmana no nahita hoe nisy lesona azo noraisina tamin'ilay izy.
Meredith ao amin'ny Hack the Bone milaza fa hampiasa ny Ramadàny izy ho toy ny volana fanesorana ireo poizina ao anatiny sy hanenjehana ny banga amin'ny fanoratana bilaogy. Hoy izy manoratra:
Niteny tamiko ilay namako miozolmana mba hanararaotra ny Ramadàny ho toy ny “andro fitsaharana” saingy manandrana ny mifady hanina aho rehefa any amin'ny birao, ho fanajàna ireo manodidina ahy. Mafy ilay izy (andro iray tamin'izay, mitsetsitsetsitra aho) saingy zara raha efako. Tsy haiko izay nandrasako tamin'ilay Ramadàniko voalohany, saingy toy ny nandry fahalemana ny tanàna.
Mohana ao amin'ny A Day in Doha mizara ny fomba nivoaran'ny fomba fijeriny ilay volana, avy amin'ny fahitàna azy ho toy ny fanelingelenana ka hatramin'ny nandraisany azy ho fotoana fanararaotra.
Milaza izy fa haka tombony avy amin'ilay andro fiasàna fohy kokoa, amin'ny fandaniany ny fotoana malalaka fanampiny ananany
“manenjika ireo namana izay raha tsy amin'io dia sahirana mandritry ny taona tsy afaka hijanona sy hitafa, na fanoratana, fanaovana fanazarantena, na zavatra maro samihafa nahemotro satria aho sahirana.”
Ny sasany amin'ireo mpiasa vahiny koa dia mandàny ny Ramadàny miezaka mianatra misimisy kokoa momba ny finoana miozolmana.
Intlexpatr, izay nanoratra Taridalana momba ny Ramadàny ao amin'ny Here There and Everywhere (Eto Any ary Eny Rehetra Eny), miteny hoe:
Tsy mahatakatra ny Ramadàny ny ankamaroan'ireo Tandrefana…io vanimpotana io dia masina aminay toy ny maha-masina ny Karemy sy ny Paska ho azy ireo. Ny Ramadàny dia ny volana nanoloran'ny anjely Gabriela ny Korany tamin'i Mohammed.
Mandritra ny sorona ao am-piangonana ao Doha, manampy izy:
Nangataka ny mpiara-mivavaka ilay pretranay raha misy aminay manana literatiora manazava ny antony tsy mampitovy ny Andriamanitry ny miozolmana sy ny an'ny kristianina. Tohina izahay rehetra nijery azy. Tsy nisy na iray aza nanangana ny tanàny. Avy eo izy nitsiky, tsiky hatreny am-poto-tsofiny no sady niteny hoe “Tsara! Andriamanitra iray ihany no misy, ary ireo miozolmana rahalahy sy anabavintsika dia midera andriamanitra tokana toy ny ataontsika.”
6 ora izayBahrain